PINK PELARGONIUM, PINK CHART IYO PANDORA: TAARIIKHDA MUUQAALKA, MUUQAALKA GEEDKA IYO SAWIR, DHALMO IYO CUDURRADA SUURTAGALKA AH IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Quruxda jilicsanaanta pink - Peelgonium Pink: sharaxaad of noocyo leh sawiro, dhalmo, beeritaanka, daryeelka iyo cudurada
Pelargonium Pink ayaa ka dhex muuqda noocyo kale oo dhirta ka mid ah. Pink waxaa lagu gartaa midabada casaan ee siyaalo kala duwan, iyadoo ku xiran kala duwanaanta.
Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sharaxaadda dhirta, sida si habboon loo daryeelo dhirta, iyo sidoo kale dhalmo.
Waxaan sidoo kale baran doonaa sida loola tacaalo cayayaanka in ay weerari karaan quruxdeeda casaan.
Qeexitaanka Botanical, taariikhda iyo qiimaha qiyaasta
Muuqaal kala duwan oo ka mid ah dhammaan Pelargoniums waa muuqaalada of inflorescences. Petals iyaga ka helaan qaab qaab dheer. Si kastaba ha noqotee, labada xayawaan ee sare waxay ku yaallaan meel gooni ah, waqti ka dib, way yar yihiin. Saddexda xayawaan ee soo hadhay ayaa weli ku yaal hoosta, si isku mid ah ayey u wada siman yihiin.
On dhirta asal ahaan dabiiciga ah, ubax waa wax aad u fudud ee dhismaha iyo taabashada. Laakiin ka mid ah noocyada hybrid waxaa jira sidoo kale Terry, ka sokow, waxay noqon kartaa foomka ugu kala duwan. Flowers waxay ku uruursataa inflorescences, taas oo qaabkoodu u eg yahay dalladaha.
Saxarada caleenta ah ee qaabkooda, sida caadiga ah, qashinka-qaabeeya, mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa caleemo xuddunta. Caleemaha caanka ah ee aadka u yar ayaa ah fern-qaabeeya ama leh dhammaatay. Midabka saxanka xaashida waa mid gaar ah: ma aha oo kaliya monochromatic, laakiin sidoo kale laba- iyo xitaa saddex-midab leh.
Inta badan qaybta dhammaan pelargoniums noo yimaado ka soo jeeda ee koonfurta afrika. Dhirta Kuwani waxay Yurub u qaateen qarnigii 17aad. Dalka ugu horreeya ee uu Pelargonium ka muuqday Holland. Halkaan ubaxa waxaa loo keenay beeralayaha maxalliga ah sida dawo.
Warshad lagu qeexay waxaa lagu iibiyaa dukaamada dhowr nooc:
abuurka (qiimaha mid ka mid ah baakada ayaa isbedbeddeli doona ilaa 100 rubaar);
gooyn yar (waxaad ku iibsan kartaa 100-200 rubaar);
dhirta ubax ee diyaar u ah (qiimaha waa qiyaastii 300 rode).
Hoos waxaad ka arki kartaa sharaxaada iyo sawirada noocyada caanka ah ee pelargonium.
Kala duwanaanta noocyadaasi waxay ku xiran tahay noocyada dhogorta leh sababtoo ah qaabka taarikada caleenka ah. Magaca labaad ee kuyaal - gaashaan (ama Ivy). Muuqaalka, caleemuhu waxay u eg yihiin maple, laakiin Pelargonium waxay ka baxaysaa midab, pentagonal.
Taargooyinka xaashida ah ee kor ku xusan waxay ku daboolaan ubaxyada ubaxa, waxay aad u cufan yihiin taabashada, fareemka, iyo quruxda muuqaalka. Inta badan, sababtoo ah caleemaha noocan oo kale (gaar ahaan muraayadaheeda), passersby waxay qaataan Pelargonium sidii dhir macmal ah. Hooska caleemaha waa lime, laakiin aad iyo aad u dhalaalaya.
Pelargonium Pink waxaa loola jeedaa ubaxyo dhaadheer, afkeeduna waa mid khafiif ah oo dheer. Sidaa darteed, Pink wuxuu ku fiican yahay koritaanka balakoonnada, xayawaanka, iyo weliba dhar xidhista.
Noocyada huuriga ah ee quruxda badan. Waxay si cad uga soo horjeedaan inta ka hartay qeybta cagaaran ee dhirta. Cabbirka ubaxa waa mid aad u ballaaran. Maadooyinka cayayaanka waa kuwo aad u jimicsi ah, waxay ku yaalaan meel u dhow midba midka kale, sidaas darteed afar meelood oo ay u eg yihiin peonies. Qodobbada dhinaca dambe ku yaala waa kuwo badan, waxay u muuqataa in hoose ee ubaxyada u muuqdaan in la safo. Dhammaan arrimahan oo dhan waxay abuureysaa saameynta qulqulka.
Noocyada ubaxyada waa mid sahlan oo muuqaal ah iyo taabashada. Waxba ma jiraan wax gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, foomka cajiibka ah waa in dhammaan burooyinkeeda la isugu geeyo. Waxay u egyihiin sida lulub, ma xitaa hal laleh oo kaliya, laakiin bouquet ah ee ubaxyada casriga ah, iyo qaar ka mid ah barbar dhigo this inflorescence leh galaas.
Caawimaad! Qeybta pandora waa la jarjaray, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad isku xoqdo inta badan ee suurtogalka ah. Xaaladdan oo kale, ubaxa dhirta ayaa noqon doona marar badan.
Taararka caleenta waxay u egtahay kabaha oyga - Waxay yihiin jaangooyooyin leh jajab yar. Midabka caleemaha waa cagaar, dhalaalaya, laakiin iftiin la'aan, garaafyada cad waxay bilaabaan inay muuqdaan. Pandora wuxuu leeyahay falcelin aad u xiiso leh jawi kulul - ma muuqato ubaxyo casaan ah, laakiin kuwa casaanka yar yar.
Kala duwanaantu kuma faani karaan waxkasta oo aan caadi aheyn ee burooyinkooda, ama qaab dhismeed gaar ah, laakiin Pinkku waa caan u yahay arooska gaarka ah, kaas oo ay ku dhowaato si joogto ah.
Saliidda muhiimka ah waxaa laga helayaa noocaan, kaas oo markaa loo isticmaalo wax soo saarka muusikada, gaar ahaan cadarka. Saliidka lagama maarmaanka ah ee loo isticmaalo Pelargonium Rose waa Faransiiska, caasimadda adduunka ee perfumery.
Sida loo abuuro si sax ah - xeerar iyo talooyin
Dhirta la tilmaamay ayaa loola jeedaa noocyo aan si fudud u dulqaadan karin qoyaanka xad dhaafka ah ee ciidda iyo hawada. Sidaa darteed hawsha ugu muhiimsan ee geedka ka hor inta laga beerto waa inuu hubiyo lakabka dheecaanka.
Sidaa darteed, sida loo beerayo Pelargonium?
Shub miir dheeri ah 2-3 cm sare ee hoose ee dheriga.
Ka dibna hurdo gaaban horay loo diyaariyey ciidda.
Gacan yar ayaa lagu dhejiyaa dheriga.
Bilowga waxay ka wanaagsan tahay inaad siiso doorbidid kontaynar yaryar. Sidaas dhirta ayaa si dhaqso badan u barbar dhigi doonta.
Laga soo bilaabo daboolka sare ee dhalada leh dhalo quraarad qurxoon. Tani waxay xaqiijinaysaa heerarka qoyaanka ee habboon.
Caawimaad! Geedka ayaa caadi ahaan diyaar u ah. Laakiin waad naftaada kari kartaa. Si taas loo sameeyo, waxaad ku qaadataa saamiga cawska iyo caleenka, iyo sidoo kale peat iyo ciid dhab ahayn.
Pelargonium waa noocyo aad u iftiimaya. In maqnaanshaha iftiinka, dhirtaas ma sii soo saari doonaan saliidaha lagama maarmaanka ah, jooji sii kordhaya iyo Bloom. Iftiinka waa inuu ku dhacaa ubax ugu yaraan 16 saacadood maalintii. Goobta Pink way ka fiican tahay inay doortaan qolalka koonfurta iyo bariga ee qolka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, beeralayda khibrad leh waxay isticmaalaan fitolampy.
Carrabku waa inuu marmarsiiyo hawo iyo biyo. Tan iyo markii la xakameynayo dareeraha substrate-ka wuxuu keeni doonaa cagaha xididada. Beerka carrada waa in uu ahaado dhexdhexaad.
Heerkulka Pelargonium waa warshad aad u kulul. Sidaa darteed, heerkulka ugu fiican waa inuu ku kala duwanaado inta u dhexeysa 25-27 digrii.
Hawadu waa in aan lagu nadiifin inta badan. Way fiicantahay haddii heerka qoyaanka lagu hayn doono 60%, oo aan ka badneyn.
Carro waa in aan la xirin.
Waraabinta Warshadani uma dulqaadanayso biyo badan oo ka hooseeya substrateka. Sidaa darteed, ha qoyan marar badan. Waxaad u baahan tahay inaad sugtid ilaa ciidda gabi ahaanba la dhaqo ka hor inta aan la haynin waraabin cusub. Nidaamka qoyaanka ee ugu wanaagsan waa 10kii maalmoodba mar.
Xilliga jiilaalka, inta badan waraabinta waxaa la dhimi karaa labadii usbuucba mar.
Bacriminta waxaa lagu doortaa content sare ee fosfooraska. Way ka fiicantahay inaadan dooran mashiinno dabiici ah, Pelargonium ayaa si xun ugu jawaabaya iyaga.
Flowerpot waa inay doortaan mid aad u weyn. Dheriga weyn dhirta ayaa kori doona oo kaliya aagga nidaamka xididka.
Cudurka ugu khatarsan ee cudurka Pelargonium wuxuu ku yareeyaa rhizomes iyo asliga ah. Inta badan tani waxay sabab u tahay boodhka joogtada ah ee ciidda. Waxaad ku arki kartaa kallanaada qaybaha jilicsan ee geedka. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in si dhakhso ah loo daaweeyo dhirta oo dhan la diyaariyo antifungal, iyo ma aha oo kaliya ubax laftiisa waa la daaweynayaa, laakiin sidoo kale ciidda taas oo ay koraan.
Waa muhiim! Lacala ma jiri doono nooca pelargonium ah.
Mararka qaar geedka waxaa lagu weeraray caaryada cawl, waxyeellada xun waxaa loo jeedaa caleemaha iyo burooyinkeeda. Xaaladdan, Pelargonium way ka go'antahay midabyo kale waxaana lagu buufiyaa walxaha fungicidal. Hawlgalka waxaa la sameeyaa labo jeer wakhti fasax ah. Ha iloobin inaad ka takhalusid meelaha ay saameeyeen ee geedka.
La dagaallama aphids, caarada iyo xagta oo budada ah ayaa lagama maarmaan u ah caawinta Bordeaux isku dar ama cayayaanka. Inta badan inta badan caddaannada cadcad iyo xayawaanka weerarka ku dhaca Pelargonium. Xaaladdan, isticmaal soodhadhka macdanta.
Ubax Tani waxay faafinaysaa hab daaqsinka ah:
Nidaamka dhalidda ee saxanka caleen iyo gabal caleen ah waxay la mid tahay midba midka kale.:
Doofaarka waa inuu doortaa xaashi caafimaad leh oo aan lahayn cillado. Ka dibna jarjar gooyo mindi fiiqan, sida haddii loo qeybiyo xaashida qaybta saddex-geesoodka ah.
Si looga hortago xakameyntan ka imaanaya qulqulka, waxay yihiin kuwo budo ah ama dambaska firfircoon.
Platinum wax yar ayaa si qoto dheer loo dhajiyay dhulka waxaana lagu daboolay ilaa inta caleemo cusub soo baxayaan.
Caleemaha dhalinyarada waxaa loo doortay beeritaanka.taas, ka dib goynta, waxay u soo baxaan hawo cusub oo qalajinaya. Soo qaado gooyaashan oo kale, oo noqon doona ugu yaraan saddex caleemo.
Waxaad geli kartaa gooynta biyaha ka hor inta aysan xididada cusub u muuqan iyaga, ama si dhaqso ah ayaad ugu beeran kartaa dhulka, laakiin isla markaasna iyaga oo kicin kara kiciyaha kobaca.
Waxaa sidoo kale jira dhalmada abuurka. Ma ahan sida ugu dhakhsaha badan sida daaqsinka, laakiin mararka qaarkood waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo habkan soo saaridda.
Wixii beerto, miraha waxaa lagu beeray dhulka, wax yar wax ku dhufasho leh dhulka.
Ciidda waxaa lagu buufiyaa buufin.
Ka dibna daboolka muraayadda ku dabool bil kasta.
Wakhtigan ka dib, caleemaha ugu horreeya ayaa soo muuqan doona, taas oo horeyba u sii fidi kartaa.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan noocyo kale iyo noocyada pelargonium, ka akhri wixii ku saabsan laf-dhabarka, karbaha, guluubka, Pak, beerta, dhulka, Rococo, Stellar, SOUTH.
Noocyada Pelargonium Pink waxaa loo arkaa ubax dumar ah, sidaas darteed waxaa la siiyaa gabdhaha iyo haweenka si ay u aqoonsadaan jilicsanaanta iyo jacaylka.